Ngwa Android iji nyefe na ụbọchị nne | Gam akporosis
Ngwa Android iji nye na ụbọchị nne
5 Mee bu ubochi nke nne na ọ bụ ụbọchị pụrụiche maka ịhụnanya niile anyị na-ezi gị. Site na Androidsis anyị chọrọ ịnye gị ụfọdụ echiche n'ụdị ngwa ka ị nwee onyinye dijitalụ nke na-abịakwute ha site na Playlọ Ahịa Google Play ha. Na eziokwu bụ na ụfọdụ ngwa anyị na-enye nwere ike iju gị anya.
Site na ngwa gaa weghara oge ndị ahụ pụrụ iche dịka mgbe ọnwa zuru ezu looms na mmiri ma ọ bụ ọzọ na nke na-jikwaa ndị niile ozi ịntanetị na nne gị na-arụ ọrụ site na-enwe ihe Etsy shop na-akpata ego. Appsfọdụ ngwa ọdịnala inye na na anyị anwaala n'ezie ime ka ọ bụrụ ihe ịmata, na-atọ ụtọ na ọbụlagodi onyinye na-arụpụta ụfọdụ.
1 mkpụrụ ọgwụ foto
2 Adobe Lightroom adịchaghị
4 Runtastic Pro onye ọzụzụ onwe gị
6 Na-achị: Egwuregwu nke n'ocheeze
mkpụrụ ọgwụ foto
Ngwa dị ịtụnanya, ebe ọ bụ naanị bụ Sun, Ọnwa na Milky Way nhazi. Nke ahụ bụ, ọ ga - eme ka ị mata ihe bụ oge zuru oke iji buru ọdịda anyanwụ ma ọ bụ mgbe ị ga - ahụ Pole Star na ya kacha mma. O nwere ihe nlere anya nke 3D nke mere ka ị nwekwuo echiche nke ihe foto zuru oke ga - adị ma ọ bụrụ na ịnọ n'oge. Ngwa iji nwee ike ịnọ n’oge ndị ahụ ebe esere foto ndị kachasị mma. Dị ka ndị niile nọ na ndepụta ahụ, ọ nwere ọnụahịa: euro 10,99.
Adobe Lightroom adịchaghị
Maka euro 4,99 kwa ọnwa ị nwere ike ime ya nnukwu onyinye nye nne gị ka ọ gbanwee foto ya wee nweta otu n'ime ndị ahụ ga-ama jijiji na Instagram na netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ. Adobe Lightroom bụ otu n'ime ngwa kachasị mma maka ịkọgharị foto ma ọ bụrụ na anyị gaa na nsụgharị kachasị mma anyị ga-enweta nchekwa igwe ojii, Adobe Sensei (maka ihe na nnabata ndị mmadụ si Adobe's AI, nhọrọ mgbanwe na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Onyinye dị ukwuu maka nne gị na ọbụlagodi ọ bụrụ na ọ na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa, kwụọ ụgwọ afọ zuru ezu nke ndenye aha, gịnị kpatara ya?
Adobe Lightroom: Dezie foto
Itoolu bụ otu n'ime ndị ahịa email kachasị mma maka gam akporo. Mana dị ka ihe niile na ndụ, ezigbo ihe na-efukarị ego. Anyị ekwuola gbasara izu itoolu gara aga dị ka email ahịa nke nwere ihe niile ịchọrọ. Ọ dịghị akọ ihe ọ bụla, isiokwu gbara ọchịchịrị, njikarịcha batrị, interface mara mma na otu ụgwọ a ga-akwụ nne gị ruo mgbe ebighị ebi. Ọ bụrụ n ’ihe kpatara nne gị jiri bụrụ ọkachamara ma nwee ụlọ ahịa nke ya na Etsy, n’ezie Nine bụ onyinye dị mma iji mesoo ndị ahịa na ọdịnihu dị mma. Nine bụ ngwa adịchaghị nke nwere ọnụ ahịa 14,99 euro, ọ bụ ezie na enwere ike ịnwale ya ụbọchị 15 ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ya n'onwe gị ịme mkpebi na ọ bụ onyinye.
Itoolu - Email & Kalinda
Developer: Ụlọ ọrụ 9Folders Inc.
Runtastic Pro onye ọzụzụ onwe gị
Inwe ama ma ghara inwe nnukwu ngwa iji gbaa ma ọ bụ kpọọ egwuregwu kwesiri ikpe ya nga (XD). Ọfọn, ọ bụghị otu a, mana onyinye dị mma karịa Runtastic Pro onye na-azụ onwe gị ka ịdekọ ụdị egwuregwu ọ bụla ma nweta ọrụ ndị ahụ dịka nkwụsịtụ ụgbọ ala, ụzọ, nsogbu, akara agba, ọzụzụ site na ebumnuche, ọzụzụ oge na onye na-enye ọzụzụ na ihe osise di omimi na lapses. Onyinye ọzọ dị ukwuu n'ụdị ngwa na-efu € 4,99
Runtastic PRO onye na-enye ọzụzụ onwe gị: ịgba ọsọ, ịga ije
A nkịtị ngwa nke ị nwere ike mepụta ụdị dị iche iche maka agwa gị na ụdị ha na random mmadụ. Oge a niile nwere nnukwu ụdị ọhụụ yana ike ịme ụdị ntutu dị iche iche site na ntutu isi ma ọ bụ nke na-enweghị isi na ntutu. Ka anyị kwuo na anyị ga-anọ n’otu ụlọ ebe a na - achọ mma mara mma ya na arịa ya niile, chaplet, akwa isi, akwa, ngwa ya. Maka otu ugwo nke euro 4,49, ị nwere ike ịnweta ọdịnaya niile otu oge. Ya mere, onyinye ọzọ dị ukwuu nke nne gị nwere ike iji oge ya na ekwentị ya nọrịa.
Na-achị: Egwuregwu nke n'ocheeze
Anyị na-akwụsị ndepụta a na usoro TV nke na-emebi ya ugbu a. O nwere ike ịbụ na ị maghị na e nwere egwuregwu ọ na-etinye gị na akpụkpọ ụkwụ nke ịbụ otu Daenerys de la Tormenta, na otu nne gị, onye na-akwado usoro a, agaghị achọ ibi n'anụ ya ihe ọ o bu nne nke Dragons? Na euro 3,49 ị nwere onyinye nke ị ga-eji kpebie ọdịnihu nke alaeze asaa ahụ, ị ​​ga-ewepụ Chọọchị ahụ ọ ga-emekwa ndị nkịtị ka ha fee ya ebighebi ruo mgbe ebighi ebi Ma ọ bụ na Spanish!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ngwa Android iji nye na ụbọchị nne
A na-abanye ọhụụ ọhụụ ọhụụ kwa ụbọchị na Noodlecake's Stealth Ops
Akwụkwọ mpịakọta ndị okenye: Udiri onye ọ bụla dị ugbu a maka beta